Juunyo 24, 2019 6:27 g 0
Radio Daljir oo xoogga saaraya, siina xoojinaya soo gudbinta wararka iyo waraysiyada iftiimaya xaaladihii ugu danbeeyey ee Dowlad Deegaanka Soomaalida, waxa uu Isniin walba idiin soo gudbinayaa warar joogta ah oo ka warrama xaaladihii ugu danbeeyey ee deegaanka, dhan siyaasad iyo dhan dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee deegaanka.
Magalaada Diridhaba ee Xarunta gobolka Sitti waa magaalo qaddiimi ah, waana magaalo taariikhiyan Soomaaliyeed. Saas oo ay tahay haddana sanooyinkan danbe, siiba labaatankii sano ee ugu dambeeyey waxaa magalaada u soo haajirey oo soo degay qowmiyadaha Oromoda iyo xitaa Axmaarada.
Saas oo xaal yahay indhawaalaba waxaa deegaanka ka biloowday iskudhacyo xooggan oo u dhexeeya qowmiyadaha Axmaraada iyo Oromada, waxa ay taasna sababtay in ciidamada Federalka Itoobiya ay toogteen laba qof oo ka soojeeda isla qowmiyadahaas dagaalsan.
Dhanka galbeedka gobolka Sitti ayaa lagu soo warramaya in maleeyshiyaad Canfaarta ay weerar la beegsadeen degmada Danlaheylay, kaddibna ay deegaanka gudaha u galeen. Rasaas xoogan oo ay is dhaafsanayeen maleeyshiyaadka weerarka soo qaaday iyo shacabka Soomaalida ee deegaanka Danlaheylay ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen illaa afar qof.
3) June 20
Shil Gaari ayaa ka dhacay magalaada Godey ee xarunta Gobolka Shabeelle, waxaana la soo wariyey in ugu yaraan afar qof ay ku dhinteen shilkaas, halka la sheegay in dhaawacuna uu tiradaas ka badanyahay. Dhaawaca ayaa waxaa la geeyey isbitaalka weyn ee magalaada Godey.
4) June 20
Dagaal beleed xooggan ayaa ka dhacay Tuulada Ceel Lamood oo ka tirsan Gobolka Qorraxey. Illaa iyo hadda war sugan iyo inta uu khasaaruhu le’egyahay lama xaqiijin karo. Labada Maleeyshiyo beeleed ayaa dadka deegaanku sheegeen in ay weli is hor-fadhiyaan, waxaana laga cabsi qabaa in uu dagaal beeleed kale uu mar kale ka qarxa deegaanka Ceel Lamood.
Daljir kala soco …
Dowlad Deegaanka Soomaalida 126 Wararka 18147